21 EYONA NDLELA IPHUCUKILEYO YOKUCHEBA IINWELE EPOMPADOUR (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IINWELE ZAMADODA
21 Eyona ndawo ilungileyo yePompadour Fade Haircuts
Eyona Iinwele Zamadoda 21 Eyona ndawo ilungileyo yePompadour Fade Haircuts
Ukuphela kwepompadour kukwahluka okwahlukileyo kweenwele zakudala zepompadour. Ngokudibanisa i-taper fade haircut kunye ne-pompadour, ipomp fade inikezela ngamacala amafutshane apholileyo, ende…
Ukuphela kwepompadour kukwahluka okwahlukileyo kweenwele zakudala zepompadour. Ngokudibanisa i-taper fade haircut kunye ne-pompadour, i-pomp fade inikezela ngamacala amafutshane apholileyo, iinwele ezinde eziphezulu.
Njengenye yezona zinwele zintle emadodeni kule minyaka idlulileyo, oku kusikwa kunye nezitayile kukhokelela kuninzi lokwahluka kunye nokubhala isitayile, kwaye usebenza nazo zonke iintlobo zeenwele kunye nobude. Kwaye abafana banokukhetha isitayile sokuphela kwepadadour kunye nokuqaqamba okanye ukukhululeka kunye nokubhalwa.
Nokuba ufuna ukuphakama okuphezulu, phakathi, okuphantsi okanye ulusu emacaleni nasemva nge-pompadour ende okanye emfutshane ngaphezulu, zininzi iindlela zokunxiba iinwele eziphelayo. Nazi ezona pompadour zilungileyo zokucheba iinwele ukukhuthaza ukujonga kwakho okulandelayo.
1Eyona ndoda iphucukileyo yePompadour iphela
MbiniI-Razor iphelile iPompadour
5Ukuphela okuphezulu ePompadour
6Ulusu luphela iPompadour
7IPompadour Taper iphela
8Ukuphela kwePompo yanamhlanje
9Mfutshane iPompadour Fade
10Ixesha elide lePompadour
Shumi elinanyeInxalenye enzima yePompadour
12Icandelo elisecaleni lePompadour
13IPompadour iphela ngeendevu
Shumi elinantlanuI-Pompadour Comb ngokudlula
16IPompadour Undercut Fade
Eyona ndoda iphucukileyo yePompadour iphela
Ukuphela kwamadoda epompadour kuyaqhubeka nokuvela njengoko abachebi abanobuchule befumana iindlela zokuhlala besenza ukusika kunye nezitayile ezintsha. Ngelixa i-pompadour yeklasikhi yaba yintsimbi yee-1950s, ipompadour yanamhlanje ibiyiyo yonke ingqumbo phakathi kwabafana abancinci namhlanje.
Umahluko phakathi kwesimbo sangoku kunye nesimanje se-pompadour iinwele zonke zisikiwe kwaye zinesitayile. Ngelixa iipompo zesikolo esidala zazakhiwe ngakumbi, zicocekile kwaye zaphinde zabuyela umva, iinwele ezithandwayo zanamhlanje zeepompadour zihlala zenziwe isitayile zikhululekile, zimdaka kwaye zenziwe ngombala wendalo. Esi sitayile senomdla sihlala sisisiphumo sokusebenzisa ukukhanya kodwa ukuqaqamba okuphantsi okanye iimveliso zeenwele ze-matte, kubandakanya ipomade, i-wax kunye nodongwe.
Kunye nokugqitywa kwe-matte kwiinwele ezenziwe ngombala, sibona abafana bebuza abachebi iinxalenye ezilukhuni, amacala anciphise amacala okwahlula okongeziweyo, kunye nokudibanisa kunye nokudibana kweendevu. Zonke ezi zinto zingafaniyo zinokongeza umnxeba wangoku kwisitayile esidala, kwaye ke jonga umkhulu nge ukuphela kwetaper okanye ngaphantsi ngasemva nasemacaleni.
Olunye uluvo lweenwele oluhamba phambili ibikukutshatisa icala okanye ukudibanisa ipompadour yevolumu eyongezelelweyo kunye nokuhamba. Ngenxa yokuba uninzi lwee-pompadours zenziwe isitayile ngeenwele eziphakathi ukuya ezinde ngaphezulu, ubude kunye namaleko avumela abafana ukuba batshintshe inkangeleko yabo iveki yonke. Ngokucheba iinwele okufanelekileyo, amadoda anokwenza isitayile se-pompadour kunye ne-quiff, ikama ngaphezulu , ifeksi , okanye ndibuyele emva .
Jonga ezi zinwele zodumo zokuthamba kweenwele zamadoda ukuze ufumane ukhuthazo ngaphambi kotyelelo lwakho olulandelayo kwindawo yokucheba iinwele!
I-Razor iphelile iPompadour
Le razor iphele ipompadour yenye yezona ndlela zishushu zokucheba iinwele zonyaka. I-razor fade emacaleni imfutshane kakhulu, ibalaselisa iinwele ezibunjiweyo ngaphezulu. Kwaye ubungangamsha obukhulu benziwe isitayile phezulu kwaye bukhululekile ekuhambeni okuphezulu kunye nakwivolumu. Kunye no-zero ophele ngasemva nasemacaleni, kukho umgca osikiweyo omtsha ochetyiwe kwizinwele. Ukugqibezela le nzwakazi yanamhlanje yokuphela, abafana banokukhulisa iinwele zobuso ngenkangeleko, yobudoda.
I-pompadour esezantsi yokuphela inokuba yeyona nto ibalaseleyo, nococeko olusikiweyo kumadoda aqeqeshiweyo. Inkqubo ye- i-taper ephantsi yokucheba iinwele emacaleni imfutshane nje ngokwaneleyo ukugxininisa isitayile ngaphezulu. Ngapha koko, esi sikhombisi sisezantsi senzuzo kwizinwele ezingqindilili, ezi-wavy, ezinika iinwele ukubukeka okwahlukileyo.
Phakathi kokuphela kwepompadour kukwahluka kancinci ngakumbi. Ukuqala ukuphela okuphezulu emacaleni nasemva kunika umahluko ngakumbi kwaye kwenza iinwele zibukeke njenge-badass ngakumbi. Abafana banokukhetha nokuba isikhumba siphele phakathi ukusika okufutshane. Kwaye ngenxa yokuba iinwele ezingqindilili ngaphezulu ubude obuphakathi, zininzi iindlela onokukhetha kuzo apha.
Ukuphela okuphezulu ePompadour
indlela yokwenza iinwele ngasemva
Ipompadour ephezulu yokuphela yi Indawo yokucheba iinwele oyithandayo . Nokuba ukhetha ukulungelelanisa iinwele ezinesikhumba esiphakamileyo endaweni yokuphephetha okanye isitayile se-pompadour evulekileyo endaweni yesihombiso esimile ngokugqibeleleyo, i-hairstyle inesitayile kwaye iyatshisa. Njengolona hlobo lwesibindi lokuphela, ukucheba okuphezulu okuphela kokuhlala kuthanda ukuba sisiseko samacala amafutshane, iindlela eziphezulu ezide.
Ulusu luphela iPompadour
Ipompadour yesikhumba ephelileyo yenye yeenwele ezilungileyo zamadoda kwiminyaka yakutshanje. Ikwabizwa ngokuba yi impandla iyaphela , oku kunqunyulwa kunokufunyanwa njengepompadour esezantsi, embindini, okanye ephezulu yesikhumba sokuphelisa umahluko omkhulu kunye nesitayile. Idume kwiindawo zokucheba iinwele kwihlabathi liphela, kulula ukubona ukuba kutheni le nto inwele engacacanga ibukeka intle kunye neenwele zepompadour!
IPompadour Taper iphela
I-pompadour taper fade inokuba ngumhlaba ophakathi kakhulu kubafana abafuna amacala amafutshane ngaphandle kokuveza isikhumba sekhanda. Njengonwele olugqibeleleyo lwamadoda emadodeni amadala okanye abafana abancinci abasebenza kwiiofisi ezilondolozayo, ezona zisikiweyo zibhetyebhetye zidibanisa amacala ngokungagungqi kwisiphelo esihle. Ubungangamsha obungqindilili, obukroliweyo kunye nobala maxesha ngaphezulu emva koko budityaniswa neendevu ezimfutshane, ezigcweleyo zesimbo sobudoda.
Ukuphela kwePompo yanamhlanje
Olu phuculo lwanamhlanje lukuxelela ngokuthe ngqo ukuba kutheni le nwele ihlala ihamba. Ulusu oluphezulu luphela phantsi kwendlela emacaleni nasemva unikezela ngombala omtsha, ococekileyo. Le nwele imfutshane kakhulu iza idityaniswe nepompadour enkulu, evulekileyo. Ukufumana le iinwele zenziwe ngombala, sicebisa usebenzisa ipomade elungileyo okanye i-wax.
Mfutshane iPompadour Fade
Oku kuphela kwepompadour kufutshane kungqina indlela ezinokuba lula ngayo iinwele. Amadoda afuna ukufumana ipompadour emfutshane kufuneka acinge ngefdd ephezulu okanye amacala achetyiweyo ukuqaqambisa iinwele ezinde ngaphezulu. Inkangeleko egqityiweyo isitayile esicocekileyo esicocekileyo esipholileyo nesinemvukelo.
Ixesha elide lePompadour
Nantsi ipompadour fade ende eneenwele ezenziwe ngombala kunye nomgca phezulu. I-pompadour yeenwele ezinde inokufuna ixesha elininzi kunye nomzamo kwisitayile, kodwa ukujonga kokugqibela kufanelekile. Njengenye yeenwele ezishushu emadodeni, awungekhe uhambe gwenxa ngepompadour ende kwiinwele ezishinyeneyo. Ukhethwe, uya kubona phezulu ukuphela kwendlela inciphisiwe yaya kulusu kunye neenwele ezicocekileyo ngoncedo lwendlela emile.
Inxalenye enzima yePompadour
Eli pompadour linzima linokuthantamisa ngokukodwa kubafana abathile. Inxalenye yesitshetshe echetywe kwizinwele yongeza umnxeba okhethekileyo, wale mihla. Emacaleni nasemva, uza kubona ukufiphala okutsha okutsha okuphezulu. Ubufutshane ukuya kubude obuphakathi kweenwele ngaphezulu kuvumela isixa esifanelekileyo sevolumu. Gcwalisa ngesilevu esityebileyo, esilungiswe kakuhle, oku kujongeka ngokuqinisekileyo kukwinqanaba.
Icandelo elisecaleni lePompadour
Eli cala lepompadour ludibaniso olupholileyo lweenwele ezimbini ze-retro ezinemvakalelo yanamhlanje. Ngenxalenye enzima echetyiweyo, iinwele ezixutywe ngaphambili, kunye ne-taper ephantsi emacaleni, oku kuchetywa kweenwele kunye nesitayile kuyinto esefashonini.
IPompadour iphela ngeendevu
Ipompadour yamadoda iphela ngeendevu konke malunga nokwaphula ukungunda. Ulusu lwaphelelwa kukungena emacaleni, ukujikeleza iitempile, i-pompadour enesitayile esiphakamileyo ngaphezulu, kunye neendevu ezigcweleyo zibonelela nge-badass. Olu hlobo lokusika kunye nesitayile luya kukwenza ugqame nakweliphi na igumbi.
Ipompadour yala maxesha yeyona ndlela ilungileyo yokwenza isitayile ngobuqhophololo kule mihla. Ngeenwele ezinde ngaphezulu, abafana banokwenza isimbo esikhulu sangaphambili phambi kokusebenzisa i-matte pomade, i-wax, okanye udongwe. Ukujonga ngakumbi, jonga uboya iinwele zakho nge pomade eyomeleleyo, ekhazimlayo.
I-Pompadour Comb ngokudlula
Ikama lepompadour ngaphezulu liyaqhubeka ukuba lelinye iinwele ezilungileyo zamadoda aneenwele ezingqindilili . Ngelixa Ikama liphele Sele inesitayile ngokwaso, ubungangamsha ngaphambili bunokujonga kwinqanaba elitsha. Yongeza kumacala aphelileyo amabi, i-razor cut cut hard part, kunye nemizila emibini yoyilo lweenwele, kwaye le iinwele zamadoda zithandekayo zinika inkuthazo enzulu kwindawo yokucheba iinwele. Kuyanceda ukuba abantu basetyhini bayayithanda ngokupheleleyo!
ukucheba iinwele zamadoda anencopho yabahlolokazi
IPompadour Undercut Fade
I-pompadour undercut fade eboniswe ngentla kwezitayile ezintle xa ubuyile umva. Amacala aphelileyo esikhumbeni ahambisa umahluko oqinileyo ngaphandle kokweba ukugxila, kunye nobukhazikhazi obufutshane ngaphezulu bunokwanela nje umbhobho wokufumana ingqalelo yakho. Abafana banokukhetha ukomisa le iinwele endaweni yolungelelwaniso lwendalo olufanelekileyo. Ngaphandle koko, sebenzisa eliphakathi ukuya kukhanya ubambe ipomade okanye ukhilimu kwaye uya kufumana ukugqibezela okufanelekileyo.
Ithetha ntoni iPlanethi nganye kwiAstrology?
Iitattoos eziPholileyo ezingama-101 zamadoda
Ungazifumana njani iinwele eziKhanyelisiweyo zaMadoda
I-35 Faux Hawk (Fohawk) Izinwele
I-37 ye-Messy yeenwele zabantu
UMegan Fox kunye noMatshini weGun Kelly's Ukuhambelana kweenkwenkwezi kulunge kakhulu
Ungamqonda njani uMlawuli wakho weTshati yokuvumisa ngeenkwenkwezi (+Isibali soMlawuli weTshati)
Iingcamango ezi-101 zeTattoo eziBalaseleyo kuMadoda
Uzitolika njani izindlu ezili-12 ezikwiTshati yakho yokuzalwa
I-25 yeenwele ezinde eziBalaseleyo zabafana
Iinwele Zamadoda Ngoku: Ezona Zinwele Zibalaseleyo Kunye Neenwele Zamadoda. Imbono Ye-Tattoos. Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi.
itshathi yeempawu ezikhulayo
ilanga inyanga ukuphuma kwetshathi
izindlu kwitshathi yokuvumisa ngeenkwenkwezi
kwisitayela sokucheba iinwele zamadoda
itshathi yendlu yezodiac
tattoos kwi forearm yakho
I-45 Iinwele ezilungileyo zeNdoda
Iinwele ezingama-35 eziTyhidiweyo zeenwele zamadoda
Copyright © Onke Amalungelo Agciniwe | ladesalpereichenbach.ch | Umthetho Wabucala